RSWO – Onkololeessa1, 2017 – ODUU, QOPHII ADDAA FI DHAAMSA RSWO
October 1, 2017 in Oromia
Jal-Bultii Ayyaana Irreessaan Wal qabatee Sochiin Wayyaanee Maal Fakkaataa Ture? Ayyaanota Biyyatti keessatti kabajaman gurguddoon, ayyaana Arafaa, Ayyaana Qillee, Chambalaalaa, Masqala dabalatee ayyaanota gurguddoo biyya impaayera Ethiopia keessaa tokkodha. Ayyaanonni kunneen akka amantaa amantaa mataasaanitti gartuu mootummaaf qaama mootummaa tokkoon utuu hindoorsifamin kabajamanii darbu. Ayyaanni kun hordoftoota amantaaf duudhaa sanaan bifa gammachuu ho’aa qabuu kabajamu. […]
(BBC Afaan Oromoo) — Irreechi bara 2017, jala bultii irraa eegalee rakkoo nageenyaa malee kabajamus, sirbootni mormii fi dhaadannoowwan mootummaa balaaleffatan ciminaan irratti dhagaahamanii jiru. Roobni ganamaan magaala Bishooftuutti roobaa turu illeen hirmaattoota ayyaana Irreechaa miliyoonaan lakka’aman iddoo horaatti walitti qabamuu hin dhorkine. Abbootiin gadaa imala miilaa sa’aatii tokkoof walakkaa booda, ganama keessaa sa’aatii 1:30 […]
Call for Demonstration – Washington, DC – Oct 2, 2017
Irreecha 2017 – Hora Arsadi – Bishoftuu – Onkoloolessa 1, 2017
Gubaa -Washington, DC Metro Area – Onkoloolessa 1, 2017